Tencent မှ ငွေကြေးထောက်ပံ့ သော Yunji Technology သည် Star Market စာရင်း အတွက်ပြင်ဆင် သည် - Pandaily
Tencent မှ ငွေကြေးထောက်ပံ့ သော Yunji Technology သည် Star Market စာရင်း အတွက်ပြင်ဆင် သည်
Feb 15, 2022, 19:55ညနေ 2022/02/16 02:27:49 Pandaily
CITIC Securities မှ ကြေငြာချက်ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက်တွင် Beijing Yunji Technology Co., Ltd. သည် A-share အစုရှယ်ယာ များအား ကန ဦး အများပိုင် ရောင်းချ မှုကို မကြာသေးမီက ပြီးစီး ခဲ့ပြီး ရှန်ဟိုင်း နည်းပညာ ဆန်းသစ် တီ ထွ င်မှု ဘုတ်အဖွဲ့ (Star Market) တွင် စာရင်းပြုစု ရန်ပြင်ဆင် နေသည်။ CITIC Securities သည်ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ မှမ ေလ အထိ အကြံပေး အဖွဲ့ အဖြစ်ဆောင်ရွက် သည်။
Yunji Technology ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၀ န်ဆောင်မှု စက်ရုပ် ထုတ်ကုန်များ ကိုအဓိက ထုတ်လုပ်သည်။ စက်ရုပ် ထုတ်ကုန်များကို ခြောက် ကြိမ် အဆင့်မြှင့် ခဲ့ပြီး စက်ရုပ် မျိုးဆက် သုံး ဆက် ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ဤ ထုတ်ကုန်များကို အဓိကအားဖြင့် ဟိုတယ် များ၊ အဆောက်အအုံ များ၊ အစိုးရ ၀ န်ဆောင်မှု ခန်းမ များ၊ ဈေးဝယ် စင်တာ များနှင့်အခြား မြင်ကွင်း များ တွင်အသုံးပြုသည်။ လက်လီ ရောင်းချ ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူး ခြင်း၊ လမ်းညွှန် ခြင်း၊ ရှင်းပြ ခြင်း၊ ၎င်းတို့ကို ဟိုတယ် မြင်ကွင်း များတွင် ဦး ဆောင် ထုတ်ကုန် များအဖြစ် စက်မှု လုပ်ငန်းမှ အသိအမှတ်ပြုသည်။
Cloud machine ထုတ်ကုန် များသည် ယခုအခါ မြို့ကြီး ၅၀၀ ကျော်နှင့် ကမ္ဘာအနှံ့ ရှိ နိုင်ငံပေါင်း ၂၀ ကျော် သို့ ပျံ့နှံ့ သွားပြီး Marriott, Hilton, WeHotel, First Trival Home, Huazhu နှင့်အခြား ကုန်အမှတ်တံဆိပ် များအပါအ ၀ င် ဟိုတယ် ၁၅၀၀၀ ခန့် နှင့်ပူးပေါင်း ခဲ့သည်။
စီးပွားရေး အချက်အလက်များအရ Yunji Technology သည် ငွေကြေး ၁၀ ကြိမ် ပြီးစီးခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများတွင် Tencent , Lenovo Capital နှင့် Incubator Group, Travel Network International, Qiming Venture Partners, China Mobile Innovation Industry Fund, CITIC Securities စသည်တို့ပါဝင်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Meta-Universe အခြေစိုက် လူမှုရေး ပလက်ဖောင်း Bard Bag သည်ဒေါ်လာ ၁၅ သန်း A + အလှည့်ကျ ရန်ပုံငွေ ရရှိ ခဲ့သည်
Zhi Tao နှင့် Hu Quan တို့သည် အစုရှယ်ယာ ရှ င်များနှင့် Yunji Technology ၏အမှန်တကယ် ထိန်းချုပ် သူ များဖြစ်ပြီး အစုရှယ်ယာ ပိုင်ဆိုင်မှု အချိုးမှာ ၉. ၇၃% နှင့် ၇. ၃၀% အသီးသီးရှိသည်။ ထို့အပြင် Zhimou နှင့် Hu တို့သည် ၀ န်ထမ်း အစုရှယ်ယာ ပိုင် ဆို င်မှုနှင့် အတူတကွ လုပ်ဆောင် သူများ၏ ဆက်ဆံရေး မှတစ်ဆင့် စုဆောင်း ထားသော အစုရှယ်ယာ ၃၆. ၅၂% ၏ မဲပေးခွင့် ကိုတိုက်ရိုက် နှင့် သွယ်ဝိုက် ထိန်းချုပ်သည်။